Erayada Adena Friedman: 55 -keedii weedhood ee ugu fiicnaa iyo cidda ay tahay | Maaliyadda Dhaqaalaha
Xigashooyinka Adena Friedman
Casudi casals | 31/07/2021 16:00 | Dhaqaalaha guud
Kaliya maahan dhaqaalayahannada ugu caansan ayaa gudbin kara xigmaddooda iyo talooyinkooda la xiriira dhaqaalaha iyo maaliyadda. Tan waxaa muujiyey weedhaha cajiibka ah ee Adena Friedman, Maamulaha Nasdaq, taasi waa hubaal codadka dhaqaalayahannada iyo maalgashadayaasha.
Waad ku mahadsan tahay sanado badan oo ay u shaqaynaysay Nasdaq iyo waxbarashadeeda, Adena Friedman waa qof ku dayasho dhab ah ku leh dunida ganacsiga. Sabab qasab ah oo ah in la fiiriyo waxa ay haweeneydan tiri.
1 55 weedhood ee ugu fiican Adena Friedman
2 Waa kuma Adena Friedman?
55 weedhood ee ugu fiican Adena Friedman
Iyada oo leh xirfad xirfadeed oo dheer xagga maaliyadda adduunka, Xigashooyinka Adena Friedman waxay noqon karaan kuwo aad waxtar u leh raadinta talo iyo dhiirigelin. Taasi waa sababta aan u liis gareyneyno 55 -ka ugu wanaagsan ee Maamulaha Nasdaq:
Kuma guulaysan kartid ganacsiga adigoon halis gelin. Runtii waa wax fudud. ”
“Bilaabidda shaqo cusub waxay noqon kartaa walaac, laakiin sidoo kale waa wax xiiso leh. Waxaad bilaabi doontaa mustaqbal cusub, adiga oo isu taagaya inaad sheeko cusub ku qorto gogol nadiif ah. ”
"Waxa ugu fiican ee aan ku samayn karno diidmada waa inaan ka dhigno khibrad waxbarasho: diidmadu waa macallin weyn."
"Had iyo jeer waxaan ahaa dhinac ganacsi, waxaan maamulaa P&L oo waxaan la shaqeeyaa macaamiisha."
"Qofna noloshiisa ma gaaro iyada oo aan la kulmin nooc ka mid ah diidmada, sidaa darteed qof walba wuu ogyahay sida ay u xun tahay."
"Awood siinta kuwa kugu xeeran in la maqlo oo la qiimeeyo waxay farqiga u dhexeysaa hoggaamiye si fudud wax u bara iyo mid dhiirrigeliya."
"Haddii ay tahay hal-ku-dheg in la yidhaahdo xiisaha aqooneed ayaa maskaxdaada ka dhigaysa mid fiiqan, dareenkaaga oo feejigan, iyo kartidaada ugu sarraysa, waa sababta oo ah waa run."
Dhageyso macaamiisha, shaqaalaha, iyo asxaabta, oo u fur fikradaha, faallooyinka, iyo jawaabaha. In sidaas la yeelaa waxay muhiim u tahay guusha hoggaamiye kasta. ”
"Waxa i xiise geliya waa kartida saamaynta iyo abuuritaanka isbeddelka iyo wadidda istaraatiijiyadda ururka."
"Waxaan jeclahay fikradda ah in la isticmaalo dhammaan sayniska iyo farsamadan si aan macaamiisheena u siino aragti qoto dheer oo ku saabsan suuqa."
"Haddii qof fursad ku siiyo, waxaa habboon inaad si fiican uga faa'ideysato oo ku siiso midka xiga."
"Fikradaha ayaa kaliya u fiican sida kartidaada aad ula xiriiri kartid."
"Haddii aad runtii ka fikirto qaab -dhismeedka Mareykanka ama maalgelinta dhaqaale kasta, maaliyaddu waa saldhig dhab ah oo ka dhigaya waxa weyn dhaqaalaha, haddii si guul leh, mas'uuliyad leh loo qaban karo, iyo jihaynta meherad."
"Waa inaad haysataa xukun badan oo aadanaha ah oo ku lug leh warshadaha maaliyadeed marka la eego maareynta halista, marka la eego go'aannada maalgashiga iyo waxyaabaha runtii noo oggolaanaya inaan isku darno tiknoolajiyadda ugu fiican iyo maskaxda aadanaha."
"Mid ka mid ah awoodaha badan ee aan inta badan ku arko haweenka guuleysta ee Wall Street waa isku -dheelitirka mas'uuliyadda leh ee u dhexeeya halista qaadista iyo yareynta halista: kartida si caqli -gal ah loo qiimeeyo xaaladaha loona sameeyo go'aanno sax ah muddada dhexe iyo muddada fog. . - Qaadashada macaashka muddada-dheer. »
"Mar kasta oo aad dareento inaad xaq u leedahay, waad khaldan tahay."
“Waxaan maalin walba u imid shaqada anigoo ku fikiraya inaan shaqadayda kasbado, runtiina waan aaminsanahay. Xaq uma lihi shaqadayda; Waxaan u baahanahay inaan caddeeyo qiimaha aan ku leeyahay doorkayga maalin kasta. ”
"Waxaan jeclaan lahaa in laygu yaqaan hoggaamiye weyn, oo aan ahayn hoggaamiye dumar ah oo weyn."
"Haddii aadan u adeegsanayn hawsha caadiga ah si aad wax u barato, waxaad ogaataa in qaar badan oo ka mid ah asxaabtaada iyo dadka kula shaqeeya ay yihiin."
"Xitaa shaqada caadiga ah waxaa laga yaabaa inay leedahay wax ay ku barato, gaar ahaan haddii ay tahay shaqo aadan horay u qaban."
“Way adag tahay inaadan shakhsi ahaan u qaadan marka aad ku jirto liiska sugitaanka, u boodday dallacaad, ama aad macmiil ku weyday tartame. Laakiin in kasta oo dareemaya xanaaq laga yaabo inay tahay falcelin la fahmi karo, ma aha mid wax soo saar leh, ma aha adeegsi khibrad wanaagsan. ”
"Diidmadu waa inay hurisaa baadi -goobka nafta, raadinta naftuna waa inay ahaataa mid daacad ah."
"Qeexitaan ahaan, khatarta ayaa shirkadaha u soo bandhigta khatar."
"Shirkadaha doorta inay ku taxaan Nasdaq waxay ka mid yihiin shirkadaha ugu hal-abuurka badan uguna halista badan adduunka, waxayna na tusayaan in qaddar-qaadista miyir-qabka ahi ay waddo dhaqaalaheena."
"Shaqooyinka heerka gelitaanku waa fursado aad u wanaagsan oo lagu baro haweenka da'da yar xaqiiqooyinka dhabta ah ee dhaqaalaha adduunka waxayna u diyaarin karaan dallacsiinta soo socota ee shirkadda dhexdeeda ama qayb kale oo ka mid ah warshadaha maaliyadeed."
"Iyada oo aan loo eegin sida ama meesha aad ka soo gasho Wall Street, u isticmaal xirfadahaaga iyo awoodahaaga si aad u guuleysato."
“Waa muhiim inaad la kulanto qaybo badan oo urur ah intii aad kari karto, maxaa yeelay maalin uun, waxaa laga yaabaa inaad fursad u hesho inaad hoggaamiso ururkaas.
“Dumar badani waxay isku dayaan inay hormariyaan xirfaddooda iyagoo wata jawaabaha oo dhan; noqoshada qofka loo soo jeesto si loo helo xog iyo talo; ama khibrad dhisme ee goob gaar ah. Si kastaba ha noqotee, markay hore u socdaan, qaadaan mas'uuliyado ballaadhan oo ay noqdaan kaalin hoggaamineed, waxay ogaadaan in baaxaddooda xakamaynta ay aad u ballaaran tahay si ay u awoodaan inay ogaadaan jawaab kasta. "
"Hoggaamiyaha dhegeysta waa midka dabacsanaanta leh oo diyaar u ah inuu turxaan bixiyo aragtidiisa iyo ficilladiisa marka uu barto macluumaad cusub ama uu maqlo fikrad ka wanaagsan."
"Si cad, waqtiga aanan shaqaynayn wuxuu la qaatay carruurta iyo ninkayga."
"Waxaan u baahannahay inaan hubinno inaan si joogto ah uga horreyno, anagoo ka fikirayna waxa soo socda."
Waxaad la qabsan kartaa maskaxdaas megamerger.
"Waxaa hubaal ah in aan taageersanahay in la yareeyo canshuurta dakhliga ee shirkadaha iyo in la maareeyo iyada oo la xakameynayo lacagta caddaanka ah ee shirkadaha maxaa yeelay waxaan u maleyneynaa in ay siin doonto saanad badan si ay u koraan ganacsigooda ayna u ballaariyaan waxa ay qabtaan."
"Shirkadahayaga waxaan u canshuuraynaa si ka badan dalal kale oo adduunka ah, sidaa darteed runtii ma dhiirrigelinno shirkadaha inay koraan oo ay ballaariyaan, waqti ka dib, taasi waxay yareyn doontaa kaalinteenna dhaqaalaha adduunka."
"Warshadaha adeegyada maaliyadeed waxay leeyihiin dhibaato sawir."
Marna ma joojinaysid barashada.
"Waxaa jira shaqooyin badan oo ka jira warshadaha maaliyadeed oo u baahan xisaab weyn."
“Si aad u noqoto agaasimaha guud ee ugu fiican ee aad noqon karto, waa inaad u qushuucdaa meheradaha aad maamusho. Aniguna waxaan u hayaa jaceyl dhab ah suuqyada maaliyadeed iyo warshadaha maaliyadeed. ”
"Shirkadaha qaarkood waxay leeyihiin barnaamij aad loo qeexay oo ay ku hawlgeliyaan dhallinta si ay uga caawiso inay ogaadaan waxa ay runtii jecel yihiin inay sameeyaan si ay goor hore ula xiriiraan maamulka sare."
“Waxaan haysannaa suuqa gaarka loo leeyahay ee Nasdaq. Laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan hubinno in maal -gashade kasta uu fursad u helo inuu ugu dambeyn ku biiro kobaca iyo guusha shirkadahaan waaweyn ee aan leenahay oo laga sameeyay Mareykanka. ”
"Nasdaq waxay maalgelinaysaa farsamooyinka, kartida iyo awoodaha xalliya caqabadaha adag ee macaamiisheennu la kulmaan."
"Waxaan aaminsanahay in sayniska dabeecadda, xisaabinta garashada iyo garashada mashiinku ay muhiim u yihiin bixinta la -socosho guul leh oo dhammaystiran, waxayna muhiim u yihiin u -hoggaansanaanta hay'adeed ee wax -ku -oolka ah ee jawiga sharciyeynta adduunka ee sii kordhaysa."
"Waxaan kaliya u arkaa naftayda qof hawlkar ah oo jecel shaqadayda."
"Had iyo jeer waxaan ahaa kan ugu horreeya, kan ugu dambeeya, laakiin ma fiicnayn."
"Mid ka mid ah waxyaalihii aan ka jeclaa filimka 'Warbixinta Dadka laga tirada badan yahay' waxay ahayd in ay u adeegsadeen dad badan oo mustaqbal ahaan la taliyayaal ah si ay isugu dayaan inay fahmaan sida adduunku ahaan doono 50 sano kadib."
“Waxaan dareemayaa inaan ku soo koray ganacsiga maalgashiga. Aabahay wuxuu joogay T. Rowe Price xirfadiisii ​​oo dhan. Waxaan ku noolayn Baltimore waxaanan lahayn goob bulsheed oo yar, sidaa darteed inta badan aabahay saaxiibbadiis waxay sidoo kale u shaqaynayeen T. Rowe. ”
"Markii aan yaraa, mar walba waxaan doonayay inaan qaato karatee, laakiin waalidkay ima aysan oggolaan sababtoo ah waxaan sameeyay waxyaabo badan oo kale, oo ay ka mid tahay baleetiga."
"Had iyo jeer dhegeyso oo baro."
"Noqo qolka wanaagsani qolka."
"Si fiican ula ciyaar dadka kale."
"Waxaa la igu qiyaasay mudnaanta iyo guulaha aan gaaray."
«Waxaan rajaynayaa in dadka kale wax iga baran karaan, khaladaadka aan galay iyo fursadaha aan helay, ama go'aannada aan qaatay: tusaale ahaan, inaanan tagin oo aan qaato shaqooyin badan oo kala duwan meelo badan oo kala duwan, laakiin inaan joogo hal meel inta badan xirfadeyda. "
"Runtii waxaan aaminsanahay in aan ahaa aabbe ka wanaagsan in aan noqdo hooyo shaqaynaysa."
«Waxaan lahaa carruur aad u yaryar. Waxaad soo martay waqti aad u weyn oo dambi ah inaad tahay hooyo shaqeyneysa. ”
Ha u malayn in fursaddaasi kuu iman doonto. Hore u soco marka ay jirto fursad. ”
Waa kuma Adena Friedman?
Si aad qiimo dheeraad ah u siiso weedhaha Adena Friedman, aan waxyar ka hadalno taariikh nololeedkeeda. Waxay ku saabsan tahay wax ka badan iyo wax ka yar haweenaydii ugu horraysay ee ka ganacsata saamiyada waaweyn ee Maraykanka. Wuxuu xirfadiisa ka bilaabay Nasdaq 1993 -kii tan iyo markaas wuxuu talaabo talaabo u fuulayay inuu xubin muhiim ah ka noqdo kooxda maamulka. Halkaas, waxay ka soo shaqeysay doorar kala duwan, oo ay ku jiraan madaxweyne ku -xigeenka istaraatiijiyadda shirkadaha iyo alaabta xogta, sarkaalka maaliyadda ee madaxa, iyo sarkaalka hawlgalka. Sidaa darteed, la yaab ma leh inay iyadu ugu jeclayd inay buuxiso jagada Maamulaha Guud.
Nasdaq: janno lagu maalgeliyo tikniyoolajiyad cusub
Maaddaama ay nolosheeda xirfadeed oo dhan u hibeysay inay maalgeliso, gaar ahaan Nasdaq, weedhaha Adena Friedman ayaa aad ugu habboon oo lagula taliyay qof kasta oo doonaya inuu galo dunida ganacsiga iyo maaliyadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigashooyinka Adena Friedman
Waa maxay shahaadada digitalka